ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ Apple ရဲ့“spaceship” ရုံးချုပ် | YOYARLAY
ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ Apple ရဲ့“spaceship” ရုံးချုပ်
Published: October 3, 20174:11 am
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီကြီးတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ ရုံးချုပ်အဆောက်အဦးအတွက် သေချာပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်လာကြပြီး ဒီလိုရုံးချုပ်သစ်အတွက် သေချာပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်တဲ့ အထဲမှာ နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Apple လည်းပါဝင်လာပါတယ်။
စက်ဝိုင်းပုံစံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Apple ရဲ့ရုံးချုပ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ကူပါတီနိုမြို့မှာတည်ရှိပြီး ဒီအဆောက်အဦးဟာ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားပြီး Apple ဝန်ထမ်းများအတွက် အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ အပန်းဖြေစရာ နေရာများ ပါဝင်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုံးချုပ်ကို ၂၀၁၇ ဧပြီလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ယခုအချိန်ထိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးပြတ်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီရုံးချုပ်မှာပါဝင်တဲ့ လေ့လာရေးဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်များက လူအယောက် ၁၂၀၀၀ လုံလုံလောက်လောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ “spaceship” ရုံးချုပ်ဟာ စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီရုံးချုပ်ကို ဆောက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ ခန့်ကတည်းက အစပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချုပ်တည်ရှိတဲ့ မြေဧရိယာ အကျယ်အဝန်းကတော့ ၁၇၅ ဧက (၇၁ ဟက်တာ) ရှိပြီး အဆောက်အဦးကတော့ ၄ ထပ်အမြင့်ရှိတဲ့ စက်ဝိုင်းပုံအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။
စတိဂျော့ရှိစဉ်ကတည်းက သူဟာ Apple ရဲ့ ရုံးချုပ်ကို အလုပ်ခွင်နေရာလိုမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘဲ ရုံးချုပ်ကို သဘာဝတရားအလယ်ထဲမှာပဲ ရှိစေချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မြေဧရိယာအကျယ်အဝန်းရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကူပါတီနိုတစ်ဝိုက်မှာပေါက်တဲ့ ရေသိပ်လောင်းပေးစရာမလိုတဲ့ သစ်ပင်များနဲ့ စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအဆောက်အဦးရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာလည်း လူလုပ်ရေကန်တစ်ကန်ကို တည်ဆောက်ထားပါသေးတယ်။ ၂၀၀၆ ဧပြီလမှာ Apple CEO ဟောင်းဖြစ်တဲ့ စတိဂျော့ဟာ ကူပါတီနိုမြို့ကောင်စီအဖွဲ့ကို Apple ဟာ ထိစပ်နေတဲ့ မြေကွက် ၉ ကွက်ခန့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Apple ရုံးချုပ်တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦးကိုလည်း ဂျော့ကဘဲ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းကိုတော့ နော်မန် ဖော်စတာက တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဟာ သူမသေခင် ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလမတိုင်ခင်အထိ ဒီရုံးချုပ်ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းမှာပဲ လုံးပမ်းသွားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၃ မှာ စတင်ဆောက်လုပ်ပြီး ၂၀၁၅ မှာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ ဒီအဆောက်အဦးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ဧပြီမှပဲ စဖွင့်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါတောင် တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းတွေဆောက်နေဆဲရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၁၇ ဧပြီ ၂၂ ရက်မှာတော့ Apple ဟာ ဒီရုံးချုပ်ရဲ့ နာမည်ကို Apple Park လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီး ဇာတ်ရုံကိုတော့ Steve Jobs Theater လို့ခေါ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Apple ရဲ့ “spaceship” ရုံးချုပ်ဟာ သူ့ရဲ့တည်ဆောက်ပုံသာမကဘဲ ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခု အဖြစ် ပုံဆောင်နေပြီး ဓာတ်ပုံစားတဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် Media တွေကြားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်သလို ရုံးချုပ်ဒီဇိုင်းကြောင့် အလုပ်သမားအသစ် ဖြစ်လာနိုင်သူတွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Apple Park မှာ ကဖေးဆိုင် ၇ ဆိုင်ပါဝင်ပြီး အကြီးဆုံးကဖေးဆိုင်ဆိုရင် ၃ ထပ်အမြင့်ရှိပြီး လူအယောက် ၃၀၀၀ လောက်စားသောက်နိုင်လောက်အောင်ကို ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Steve Jobs Theater လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ရုံဆိုရင် Apple Park ရဲ့ထိပ်ပိုင်းရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုအတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်သစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတုရန်း အကျယ် ပေ တစ်သိန်းရှိတဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစင်တာဟာဆိုရင် Apple park ရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး အလုပ်သမား ၂၀၀၀၀ ခန့်အားကစားဆော့ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ကာ အဝတ်လဲခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အဝတ်လျှော် Service နဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဆော့ကစားတဲ့ သူများအတွက် အခန်းများပါဝင်ပါတယ်။ R & D (Research and development) အဆောက်အဦးအနေနဲ့ စတုရန်းပေ ၃ သိန်းရှိတဲ့ အဆောက်အဦးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားဖြင့် အလုပ်လာသူတွေအတွက် မြေအောက်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တစ်ခု ထားပေးထားပြီး ကားရပ်နားဖို့နေရာကတော့ ကားပေါင်း ၁၁၀၀၀ လောက်ရပ်နားနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ကားတွေအတွက် အားသွင်းနိုင်တဲ့ ပါကင်နေရာ ၇၀၀ ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင်အလုပ်သမားများ Park အတွင်းမှာ ဟိုဟိုဒီဒီသွားနိုင်ဖို့အတွက် စက်ဘီးပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ထားပေးထားပြီး လာရောက်လည်ပတ်သူ ဧည့်သည်တွေအတွက်လည်း စတုရန်းပေ ၂ သောင်းကျော်ရှိ Visitor Center တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီရုံးချုပ်တစ်ခုလုံးအတွက် စွမ်းအားကိုတော့ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုပဲ အသုံးပြုထားပြီး Apple ရဲ့ ရုံးချုပ်ဟာ စွမ်းအားအချွေတာဆုံး အဆောက်အဦးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ရုံးချုပ်ရဲ့ အမိုးတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Solar Panel တွေဟာ တစ်နေ့ကို ၁၇ မီဂါဝပ်ထုတ်လုံးပေးနိုင်ပြီး အဆောက်အဦးရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၇၅ % ကို Cover လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Solar Panel တွေကြောင့် Apple ရုံးချုပ်ဟာ Solar ပြားအများဆုံး အဆောက်အဦးတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဇီဝလောင်စာတွေအသုံးပြုစွမ်းအင်ထုတ်ပေးတဲ့ စက်တွေက ၄ မီဂါဝပ် ထပ်မံ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုံးချုပ်ကို လေဝင်လေထွက် အထူးကောင်းမွန်စေဖို့တည်ဆောက်ထားပြီး သဘာဝလေဝင်လေထွက်အအေးပေးတဲ့ စနစ်ကိုသာအသုံးပြုထားပြီး HVAC စနစ်ဆိုတဲ့ Heating, ventilation, and air conditioning စနစ် ကို အသုံးမပြုထားပါဘူး။
Apple ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီလျံ နီးပါးတန်ကြေးရှိတဲ့ ရုံးချုပ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အလုပ်ခွင်က ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေမှ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်နေရတဲ့ နည်းပညာသမားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ၂၁ ရာစု ဆီလီကွန် တောင်ကြားက နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ အားလုံး အလုပ်ခွင်မှာ အားကစားခန်းမတွေ၊ အနားယူဖို့နေရာတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ သွားလာရေးအတွက် ဘတ်စ်ကားတွေကို အပြိုင်အဆိုင် စီစဉ်ပေးလာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝန်ထမ်းဝတ်စုံတွေ အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတ်စုံတွေအပြင်၊ အချိန်တင်းကြပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အလုပ်ချိန်တွေနဲ့ အတူ အလုပ်သမားတိုင်း သာတူညီမျှအကျိုးခံစားရတဲ့ အလုပ်ခွင်တွေဖြစ်စေဖို့ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ဆောင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လေ့လာချက်တစ်ခုအရလည်း ရုံးချုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိခြင်းက အလုပ်သမားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ထိန်းထားတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်နေရတဲ့နည်းပညာသမားတွေအတွက် ဒီလောက် အလုပ်ခွင်ကောင်းကောင်း စီစဉ်ပေးထားမှလည်း တော်ရာကျတာပါ။ အလုပ်ခွင်တွေကို နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ အပြိုင်အဆိုင် ကောင်းအောင် ကြိုးစားလွန်းလို့ ပြည်သူတွေနဲ့ ပြဿနာတတ်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Google ရုံးချုပ်သို့ သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုသာ သီးသန့်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ piñata ဘတ်စ်ကားတွေကို ကန့်ကွက်သူတွေ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်လိုမျိုးပါပဲ။
ဒီလို ပြိုင်ဆိုင်မှုကြားထဲမှာ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ထူးထူးခြားခြားပုံစံနဲ့ ရုံးချုပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ဘယ်သူ့အလုပ်ခွင် ပိုကောင်းမွန်သလဲဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲထဲကို Apple တစ်ယောက်တော့ သူ့ရဲ့ spaceship ရုံးချုပ်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
Ref : BBC Tech : billion-dollar-corporate-campus
Facebook မှာ Grateful Reaction အသစ်ထပ်တိုးပြီ
နာမည်ကြီး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ Facebook မှာ ကိုယ့်ခံစားချက်အလိုက် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Reaction တွေရှိပါတယ်။ Post Views: 313
Published: May 12, 20173:01 am
V7+ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရာက ဘာလဲ
လတ်တလောမှာတော့ V7+ အကြောင်းက လူပြောသူပြောများနေပါတယ်။ မီဒီယာတွေမှာလည်း V7+ အကြောင်း အတော်လေး ရေးသားဖော်ပြနေကြသလို စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကြားမှာလည်း V7+ အကြောင်းကို ပြောဆိုမှု များနေကြပါတယ်။ ဒါဖြင့်ရင် V7+ က အခုလိုပြောလောက်စရာ အကြောင်းအရာ ဘာတွေများ…
Published: October 4, 20176:04 am
ကွန်ပျူတာသုံးရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူသွားစေမယ့် windows ကီး Shortcut များ
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်က windows ကီးကို Windows ပေါ်လာဖို့ပဲ သုံးနေတုန်းလား? တကယ်တော့ Ctrl + Shortcut တွေလိုပါပဲ…. Windows ကိုလည်း ကီးဘုတ်ပေါ်က တခြားစာလုံးတွေနဲ့ တွဲဖက်လို့ Shortcut အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေအသုံးပြုလို့ရလဲ…
Published: February 19, 20193:50 pm
အန်ကောဝပ်ဘုရားကျောင်းထက် ပိုပြီးရှေးကျတဲ့ ဘုရားကျောင်း (၁၀၀) နီးပါးရဲ့ အပျက်အစီးတွေ တွေ့ရှိ
Published: May 24, 20191:05 pm Updated: 4:30 pm
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အမှိုက်တွေကို ပြန်လက်ခံမယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံ ပြော
Published: May 24, 20191:02 pm Updated: 4:12 pm
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားလို့ အနည်းဆုံး လူ (၁၃၈) ဦးသေဆုံး
Published: April 21, 20199:53 pm